कसरी चिन्ने ? लक्षण कस्तो हुन्छ ? उपचार सम्भव छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ डाक्टरको सुझाव - Complete Nepali News Portal
कसरी चिन्ने ? लक्षण कस्तो हुन्छ ? उपचार सम्भव छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ डाक्टरको सुझाव
रोग कडा भएको खण्डमा मन्द ज्वरो आउने, शरीरमा रगतको कमी हुने, हातगोडामा गिर्खाहरू देखा पर्ने, आँखा रातो हुने र दुख्ने तथा मुटु र फोक्सोलगायत शरीरका अन्य अंगहरूमा सुजन भई ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। यो रोगमा शरीरको रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिमा ह्रास आउने भएकाले निमोनिया, छाला तथा मूत्रमार्ग जस्ता अंगको इन्फेक्सन बढी र जटिलरूपमा देखिने सम्भावना हुन्छ।
सासारभरिकै मानिसमा स्वास्थ्य समस्या एकपछि अर्को थपिँदै गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको वृद्धिसँगै बाथ रोग पनि एक जटिसमस्याका रूपमा देखापरेको छ। यसमा पनि ¥युमटोइड आरथ्राइटिस भनेर चिनिँदै आएको बाथरोगको समस्याले अहिले धेरै मानिस पीडित छन्। यस रोगबारे मानिसमा जानकारीको अभावले पनि रोगीहरू उपचारका लागि अलमलिरहेका देखिन्छन्। तसर्थ उपचार गर्नुभन्दा अघि यस रोगका बारेमा जान्नु जरुरी छ।
यसै विषयमा हामीले बैङलोरबाट बाथ रोग तथा प्रतिरक्षाको विषयमा २ वर्ष उच्च शिक्षा हासील गरि हाल पोखराको अन्नपुर्ण सिटी क्लिनिकमा कार्यरत बाथ रोग तथा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ डा. रामकृष्ण गिरीसंग हामीले बाथ रोगको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । हेर्नुहोस यो कुराकानी ।